Raila Odinga oo Baaq u Diray Taageerayaashiisa in Aysan Maalinta Isniinta Shaqo Tegin – Balcad.com Teyteyleey
Raila Odinga oo Baaq u Diray Taageerayaashiisa in Aysan Maalinta Isniinta Shaqo Tegin
Hogaamiyaha Xisbiga Mucaaradka dalka Kenya Raila Odinga ee looga adkaaday doorashdii dalkaasi ka dhacay ayaa ugu baaqay taageerayaasha xisbiga Mucaaradka in aysan beri oo isniin ah aysan shaqo tagin.
Raila Odinga oo dadweyne taageersan kula hadlay fagaare kuyaala xaafadda isku raranta ah ee Kibera oo ku taal magaalada Nairobi, ayaa ugu qaaway in maalinta berito aysan shaqo tagin ayna sameeyaan banaan bax nabadeed .
Hogaamiyaha xisbiga Mucaaradka dalka Kenya ayaan wali ku qanacsaneyn natiijada doorashadii ka dhacday dalka Kenya uu mar kale ku guuleestay Uhurru Kenyatta, waxa uuna Sheegay Raila in doorashada lagu shubtay ayna dhacday wax isdaba marin.
Magaalada Nairobi iyo qeybo kale oo kamid ah dalka Kenya ayaa laga dareemayaa cabsi xoogan , waxaana laga cabsi qabaa hadii ay banaan baxyo beri sameeyaan taageerayaasha xisbiga Mucaaradka in ay rabshado ka dhashaan.
Rabshado ka dhacay waxii ka dambeeyay markii doorashada natiijadeeda la shaaciyay ayaa dalka Kenya lagu dilay dad ka badan 10-qof oo u badnaa taageerayaasha Xisbiga Mucaaradka ee laga guuleestay, rabshadaha xoogooda ayaana ka dhacay magaalada Nairobi.
The post Raila Odinga oo Baaq u Diray Taageerayaashiisa in Aysan Maalinta Isniinta Shaqo Tegin appeared first on Ilwareed Online.
Kulan Dhexmaray Ra’iisalwasaare Kheyre iyo Abuu Mansuur